Natsiridza ruzivo rwevashandisi paLinux Mint Olivia neCairo-Dock. | Kubva kuLinux
Natsiridza ruzivo rwevashandisi paLinux Mint Olivia neCairo-Dock.
Cinnamon ine kuita kwakanaka pane chero timu asi iyo Cinnamon Menyu zvinoonekwa zvinorema muzvikwata zvine mwero. Ngatione maitiro ekuvandudza izvi kuitira kuti timu yedu ipindure ipapo ipapo.
Mune ino kesi ini ndakasarudza bvisa Sinamoni Menyu pani uye gadza Cairo Dock Kunyangwe isu tichigona kuisa chero imwe Dock yatinoda, iko kushanda kwakafanana.
Kutanga ini ndakadzvanya bhatani rerudyi remouse pane Sinamoni pani uye ini ndakawana mamiriro ezvinyorwa, ini ndakadzvanya pairi Wedzera Applets kuPaneli .
Iye zvino tinosarudza bvisa Shinamoni Menyu pani. Ndabvisawo Cinnamon Windows Rondedzero nekuti ndinonyepedzera kuti basa iri rinoitwa Cairo Dock hereinafter.
Kuisa Cairo Dock hapana chakakosha kuita, kubva ku Software Center tinotaipa Cairo Dock muinjini yekutsvaga uye maka kuti uise.
Iye zvino tinogona kumisikidza Cairo-Dock yekumhanya pakutanga kwechikamu chedu. Kune izvi tinogona kushandisa Sarudzo dzeSystem uye Wedzera Zvirongwa Kutanga, kana kungoteedzera nekunamatira Cairo-Dock Launcher kubva / usr / share / application ku ~ / .config / autostart, nekuti izvi isu tinofanirwa kuratidza mafaera akambovanzwa.
Pamusoro pekupinda nyowani, Cairo-Dock ichave ichimhanya nemhinduro inokurumidza kwazvo mukubatana kwedu neinongedzera mbeva.
Iye zvino tava nenzvimbo hombe yemahara muPaneru yatinogona kutora mukana wekugadzira maruncher kana chero zvatinga funge nezvazvo, ini ndagadzira chinotanga kuratidza uye kuviga Conky asi ndiyo imwe nyaya. 😉
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Natsiridza ruzivo rwevashandisi paLinux Mint Olivia neCairo-Dock.
Solid Rugs Pacheco akadaro
Izvo ndizvo zvandaitsvaga 😮 ndaive ndachinja kuita Elementary yechinhu chimwe chete ichocho, ndatenda, ndichaedza
yakakwana, ndakagara ndichishandisa doko asi zviri pachena kuti ini ndinozochinja mushure mekuyedza. nenzira, zita reapplet raunoratidza muvhidhiyo ine data rehurongwa ndiani? Ndotenda zvikuru!
Isaac calderon akadaro
Kugona chose. Mumwe mubvunzo, nderipi dingindira rauri kushandisa? Ini ndichangobva kuisa Mint - Olivia kune rangu bhuku rebhuku uye ini ndakanyatsofarira iyi theme. Zvido.
Pindura kuna Isaac Calderon
Iwo windows muganho ndiBluebird, Faenza-Cupertino Icons, theme yeCinnamon ndeye Facebook, uye muCairo-Doc ini ndinoshandisa yakajairika pani fomati ine Faenza-Cupertino mifananidzo.
Iyo Aplet inonyatso conky yakagadziridzwa kubva kune yapfuura kumisikidzwa uye ine diki script inoita kuti iite kuti ionekwe kana kutsakatika kana iwe ukadhinda.
Ini ikozvino ndaisa LXDE mukati me linux mint ine compiz uye cairo dock, compiz ne lxde ine bhalanzi pakati pekuona zvinoonekwa, kugona uye nekumhanyisa. Uye zvechokwadi conky kuti munguva pfupi ini ndichaburitsa maitiro andakazviita.
Ndotenda zvikuru. 🙂
* Kutsvaga… *
masikati akanaka ndine mibvunzo yakati wandei.
Iwe unotaura kuti kuitira kuti sisitimu iende nekukurumidza izvo zvaunoita zvinomisa basa
Cinnamon Menyu yepaneru uye Cinnamon Windows Rondedzero nekuti ini ndoda iro basa kuti riitwe neCairo-Dock
Unogona here kutsanangura izvi zviviri zvinoshanda; ndiko kuti, vanoitei?
Pakati peCairo-dock, plank, AWN, Docky inova yakanakisa, ndeipi yaunosarudza uye nei?
Pindura kuna obv
Ivo vanongobvisa iyo huru sinamoni menyu uye iro runyorwa rweakavhurika windows. Izvo zviviri zvinoshanda zvinounzwa neCairo-dock uye zvikasadaro zvaizodzokororwa.
Nezvekuti ndeupi akanakisa… chinhu chaicho pachako. Ini ndinoda Cairo-doko asi mamwe ese akanyanya kunaka uye yega yega inosimbisa nyaya dzakasiyana. Kurudziro yangu: edza ivo vese. MuLinux zviri nyore kwazvo ...
KDE 4.11 Beta1 inowanikwa
Samba: Inodiwa Nhanganyaya